Sida Loogu Maareeyo Ololaha Emailka Gmail | Martech Zone
Sida Loogu Maamulayo Ololeyaasha Emailka Gmail
Mararka qaar uma baahnid adeeg bixiye iimayl buuxa ah (ESP) oo leh dhammaan dawannada iyo foorida ee maaraynta liiska, kuwa wax dhisaya ee emaylka loo soo dirayo, iyo qalab kale oo casri ah. Kaliya waxaad dooneysaa inaad liis qaadato oo aad u dirto. Iyo, dabcan, haddii ay tahay farriin suuqgeyn ah - sii awoodda dadka waawayn ay uga bixi karaan farriimaha mustaqbalka. Taasi waa halka YAMM ay noqon karto xalka ugu fiican.
Haddana Meel Mideyn Kale (YAMM)
YAMM waa barnaamij midaynaya iimeylka awood u siinaya dadka isticmaala inay dhisaan liistada (soo dejinta ama Foomka Google), u qaabeeyaan emayl shaqsiyeyn ah, u diraan liiska, cabbiraan jawaabta, oo ay ku maareeyaan macaamiisha ka baxsan dhammaan xalka fudud.
YAMM: Isku-darka Email-ka Bixitaanka Fudud ee Google Mail & Spreadsheets
Ku xir xiriiradaada xaashida Google - Ku rid cinwaannada emaylka dadka aad rabto inaad ku soo dirto Google Sheet. Waad ka qaadan kartaa Google Contacts-kaaga ama waxaad ka soo dhoofsan kartaa CRM-yada sida Salesforce, HubSpot, iyo Copper.
Abuur fariintaada Gmail - Ka dooro shaxanka tusaalayteena shaybaar, ku qor macluumaadkaaga iimaylka ee Gmail, ku dar xoogaa shaqsinimo ah, oo ku kaydi qabyo ahaan.
U dir ololahaaga YAMM - Dib ugu laabo Waraaqaha Google si aad ugu dirto oo aad ula socoto ololeha emaylkaaga oo ah "Isku Xidhmo Meel Kale". Waxaad awoodi doontaa inaad aragto cidda booday, aan diiwaangashanayn, la furin, la gujin, iyo ka jawaabista farriimahaaga si aad u ogaatid waxa xiga ee loo diro.
Si aad u bilowdo, kaliya ku rakib YAMM Google Chrome. YAMM wax weyn ayey leedahay dukumentiyada iyo sidoo.
Ku rakib YAMM Chrome
Tags: riixistaololayaal emailGmailraadinta gmailfoomamka googlegoogle g suitesida looyamm